Apụl | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Kedu uru na mmerụ apụl
Apple bụ mkpụrụ osisi a ma ama nke a na-ahụkarị na nri anyị n'afọ niile na nsụgharị dị iche iche. Na oge na-ekpo ọkụ, ị nwere ike iri nri na mkpụrụ ọhụrụ ma ọ bụ nke a kụrụ n'ubi, n'oge oyi na-abịakwa ọtụtụ blanks. Ka mkpụrụ osisi apụl na-eme ka anụ ahụ nwee ike ịba uru na nsogbu dị ntakịrị, ị ga-eburu n'uche ihe ụfọdụ.
Iwu maka ịkụ mkpụrụ osisi apụl na mmiri: mgbe ị ga-akụ, esi akụ, ihe ndị mebiri emebi mgbe ị na-akụ ihe
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite mkpụrụ osisi apụl na ibé gị ma ọ bụ kụọ otu osisi dị otú a, ma nwee ọtụtụ ihe ubi, ị ga-ebu ụzọ chọpụta otú ị ga-esi mee ya n'ụzọ ziri ezi: esi akụ osisi apụl, mgbe ọ ga-akụ ya na mmiri, ebe ọ ga - ahọrọ, kedu atụmatụ osisi na t.
Akpa Rannetki: nkọwa, njirimara, ịkọ ihe
A pụrụ ịchọta apụl Rannet n'ọtụtụ n'ubi, karịsịa na Siberia. Mkpụrụ a bụ ọkara ọhịa, ma apụl agaghị efunahụ ụtọ na ngosi. A na-ewere osisi apụl dịka osisi mkpụrụ osisi na-enweghị atụ, na iji nlezianya lekọta ya nwere ike ịmị mkpụrụ maka afọ iri na ise. Ọ bụrụ na ị na-eme kwachaachaa na mgbochi nke pests na ọrịa, ị nwere ike nweta ezigbo owuwe ihe ubi ruo ọtụtụ afọ.
Otu esi eme mmanya mmanya: uzom nri maka nri nri ulo
Mgbe okwu ahụ bụ "mmanya" n'isi ahụ bilitere otu mkpakọrịta na mkpụrụ vaịn. N'ezie, mmanya vaịn bụ ụdị kachasị mma nke mmanya a. Ma, ọ dịghị ihe na-atọ ụtọ na ọ bara uru na mmanya dị iche iche na-esi na tomato na mkpụrụ osisi ndị ọzọ. Taa, anyị na-ekwu banyere otu esi eme mmanya mmanya. Uru na nsogbu nke ngwa Apples bara ọgaranya na vitamin na uru ndị ọzọ bara uru.
Kedu otu esi echekwa apụl ruo mgbe mmiri
Mgbe owuwe ihe ubi ahụ dị ukwuu, anyị na-eche otu esi echekwa apụl maka oyi. Ọtụtụ mgbe, usoro ahụ dị ka ọ dị mfe, ma n'eziokwu, e nwere ọtụtụ ndị na-adabereghị na iwu, enweghị ike ime ihe ga-eme ka ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ọkụkụ ahụ daa. Ya mere, ọ dị mkpa ịmara banyere ụdị apụl ndị nwere àgwà kachasị mma, yana ọnọdụ nchekwa na nhazi.
Ntụziaka na peculiarities nke nri pickled apples maka oyi
Apụl - otu n'ime ụdị mkpụrụ osisi ndị kachasị ọnụ na ọnụ ahịa na ụlọ ahịa na ụlọ ahịa. Ha dị nnọọ iche na uto na nha, na efere ndị a na-esi n'aka ha ruru akwụkwọ akwụkwọ nri dị iche iche. A sị ka e kwuwe, mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ, ọ bụghị nanị na a ga-eri nri, ma kwadebe kwa ụdị jams, pies, akpọọ nkụ na oven, akọrọ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe dị mma mkpụrụ osisi a kụrụ maka akọrọ, n'oge ime na n'ọnọdụ ndị ọzọ
Otu ilu Bekee kwuru, sị: "Rie 1 apụl otu ụbọchị ma ị ga-adị mma." Apụl bụ mkpụrụ osisi siri ike, nke, ọzọ, dị ka ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla. Taa, anyị ga-ekwu banyere apụl a kụrụ - ọ dị ha uru, olee otu ha si emetụta akụkụ dị iche iche nke mmadụ na usoro, yana iwu na ụkpụrụ maka iji ngwaahịa dị otú ahụ.
Etu esi enweta ihe omimi akpughi akwukwo na juicers n'ulo
Naanị umengwụ amaghị banyere uru nke mkpụrụ osisi na akwukwo nri. Ma, ọ bụ ego ndị dị na ụlọ ahịa ahụ bara ezigbo uru? Taa, anyị ga-ekwu maka ịkwado onwe gị nke mmiri apụl na enyemaka nke ụzọ dị mfe nghọta, na uru ọ bara karịa ịkwanye mmiri na akpa. Mkpụrụ osisi a na-agbanye ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ juru na akpa bụ ihe dị elu nke abụọ, ya bụ, a na-eme ya site na ngwaọrụ ndị fọdụrụ mgbe ịpịchara mkpụrụ osisi.
Efrata, uru, uzommeputa maka apụl ihe ọṅụṅụ
Ole na ole ga-agọnahụ uru nke apụl. A kwenyere na ọ bụrụ na ị na-eri apụl otu ụbọchị, ị nwere ike ichefu ọrịa ma leta ndị dọkịta ogologo oge. Kedu ihe m nwere ike ikwu banyere ihe ọṅụṅụ apụl - uche nke uru bara uru site na mkpụrụ a. Apụl dị na mpaghara anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ nile, nwere ọnụ ala dị mma na nke a na-anakwere, n'ihi na onye ọ bụla nwere ike ịnweta ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ.
Esi esi esi nri oporo ihe omimi maka oyi na-eji juicer
N'etiti ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, ihe ọṅụṅụ apụl bụ ihe kachasị ọnụ na ndị a ma ama. Dị ka vitamin-mineral composition, ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ ya "mmiri dị ndụ", n'ihi na ọ bụghị nanị na ọ na-eme ka ahụ anyị dị ọhụrụ, kama ọ na-egbochi ọrịa dịgasị iche iche, karịsịa ma ọ bụrụ na a na-egbucha mmanya ahụ.
Otu esi eme ka apple ichikota na vodka (na mmanya)
Onye ọ bụla anụla banyere uru a na-apụghị ịgbagha agbagha nke apụl maka ahụ mmadụ, nke a na-apụghị ikwu banyere mmanya na-aba n'anya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbe ọ bụla a na-ejikọta ya na mkparị na njirimara, ka o sina dị, aha ọjọọ na mmanya na-aṅụbiga mmanya ókè banyere okwu ọma banyere ya. Ma ọ bụrụ na ị jikọtara apụl na ịṅụ mmanya na nsị apụl nke vodka, mgbe ahụ, anyị na-enweta nnukwu ihe ọṅụṅụ na mmepụta, nke na-etinye uche n'àgwà ọma niile nke apụl na nke ọma, nke ka na-aṅụ mmanya.
Otu esi eme ka appleauce na mmiri ara aghara aghara
Nke a na-atọ ụtọ apụl nkwadebe n'ụdị apụl puree na mmiri ara ehi condensed bụ nnọọ siri ke uto, ọ na-akpọ mgbe ụfọdụ "sissy". Ọ dị mma maka pancakes, pancakes na ụfọdụ desserts. Ị nwere ike tinye ya dị ka ihe jupụtara na pies ma ọ bụ mee akwa oyi na achịcha, ma ọ bụ na ị nwere ike iri nri na ngaji. Nchebe dị otú ahụ dị mfe iji esi nri na stovu ma ọ bụ na-adịghị ngwa nri.
Esi esi nri apple jam "Ise nkeji": nhazi nzọụkwụ site nzọụkwụ na foto
A kọwapụtara nke ọma apple apple "Pyatiminutka", nke mbụ, site n'oge dị mkpirikpi nke ọgwụgwọ ọkụ ya, nke na-enye ohere iji chekwaa ọtụtụ n'ime uru bara uru nke mkpụrụ osisi ndị mejupụtara ya. Tụkwasị na nke ahụ, usoro nchịkọta dị mfe nke na-adịghị achọ nkà ịkụzi pụrụ iche, yana ezigbo utịp utịp, na-eme ka ngwaahịa a bụrụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ezinụlọ.
Esi esi nri apụl: Ezi ntụziaka na foto
Ụzọ kachasị mma ị ga-esi echekwa apụl bụ jam si n'aka ha. Mkpụrụ obi ụtọ ya na obi ụtọ ga-echetara oge okpomọkụ ma mee ka ezi obi ụtọ. Anyị ga-eweta ntụziaka dị mfe na nke abalị maka nri a. Banyere uto Iji mee apple jam, ọ dịghị mkpa iji họrọ ụdị ụtọ dị iche iche.
Apple sauces: nri nzuzo na ulo
Winter bụ oge mgbe a kwadebere efere dị iche iche maka ọtụtụ ezumike. Ọ na - eme na olivier na azụ asa na - agwụ ike nke uwe aji - Achọrọ m ịnwale ihe ọhụrụ, mana n'otu oge ahụ jiri ngwaahịa ndị a maara na nke dị ọnụ ahịa, dị ka apụl. Ị nwere ike ịtu aka na ntụziaka nke mba ndị ọzọ. Dị ka ihe atụ, mee chutneys.
Nri apple jam na ngwa ngwa cooker: nzọụkwụ site nzọụkwụ uzommeputa
Otú ọ dị, Apple bụ otu n'ime mkpụrụ osisi kasị ewu ewu n'ụwa. Na mgbakwunye na ojiji ọhụrụ, a na-emepụta ụdị dị iche iche site na mkpụrụ osisi ndị a dị iche iche: jam, ichebe, mkpụrụ osisi a mịrị amị, wdg. Apple jam bụ ebe sara mbara. Ojiji nke multicooker na - eme ka usoro nkwadebe ya dị mfe - anyị ga - atụle atụmatụ dị na isiokwu ahụ.
Nri apple jam na ngwa ngwa cooker
Gbanye cup nke tii tii na mgbede oyi oyi ma nye ncheta nke oge gara aga apple jam. Ezi ntụziaka nke amber a, ihe dị ụtọ na aromatic dessert bụ ndị buru ibu na ha niile dị nnọọ mfe ịkwadebe, mana, esiri ya n'ọkụ ngwa ngwa, ọ gaghị eme ka nsogbu ọ bụla wee pụta ma dị ezigbo ụtọ.